GarageBand for Mac dia nohavaozina amin'ny kinova 10.1.1 miaraka amin'ny fanatsarana lehibe | Avy amin'ny mac aho
GarageBand for Mac dia nohavaozina amin'ny kinova 10.1.1 miaraka amin'ny fanatsarana lehibe
Jesus Arjona Montalvo | | Games, Mac App Store
GarageBand nohavaozina izy io mba hanohanana ireo vokatra Apple hafa, ary koa ireo tadivavarana mozika. Ity kinova navotsotrao ity Apple dia nahatratra ny kinova 10.1.1. Miaraka aminy, ny rindrambaiko izao dia manohana naoty mozika. Ny fanavaozana dia mifantoka indrindra amin'ireo fiasa vaovao napetraka ao amin'ny iOS, ary mampifanaraka azy ireo OS X ary fanatsarana bebe kokoa. Ny kinova ho an'ny iOS izay nohavaozina tamin'ny volana Janoary, ka nandany fotoana ny fiaraha-miasa amin'ireo rafitra fiasa roa. Ny GarageBand vaovao ho an'ny Mac dia mifanaraka ihany koa Tadivavarana vaovao 2.600 y feo paoma.
Anisan'izany ny manampy tadivavarana mivantana na fotoana tena izy. Araka ny voalazan'i Apple, dia nentanin'ireo mpamily fitaovana an'ny DJ sy milina amponga, ary mamela ny mpampiasa hamorona mozika amin'ny paompy tsotra amin'ny kitendry fitendry.
Manolotra ihany koa ny fanavaozana fahamendrehana bebe kokoa rehefa misintona atiny vaovao, ankoatry ny fanovana sy fanatsarana ambadika hafa.
Avelanay eto izay vaovao ao amin'ny kinova 10.1.1.
Fanohanana nohavaozina ho an'ny tetik'asa GarageBand ho an'ny iOS sy Live Loops.
Mety hanokatra tetik'asa Musical Bloc.
Izy io dia mifanaraka amin'ny lojika lavitra ho an'ny iPhone sy iPad Pro.
Maherin'ny 2600 Apple Loops ary feo vaovao.
Azo itokisana kokoa rehefa misintona atiny fanampiny.
Fanatsarana ny fidirana isan-karazany.
nohavaozina: 07 / 04 / 2016
Malagasy Bible: 10.1.1
habe: 938 MB
fiteny: Espaniôla, Alemanina, Katalàna, Tseky, Sinoa Tsotra, Sinoa nentin-drazana, Koreana, Kroaty, Danoà, Slovakia, Failandey, frantsay, grika, hongroà, indonezianina, anglisy, italianina, japoney, malay, holandey, norveziana, poloney, portogey, romana, Rosiana, soedoà, Thai, tiorka, ukrainien, vietnamiana
mifanentana: OS X 10.9 na taty aoriana.
Afaka mividy ianao 'GarageBand' ho an'ny Mac mivantana avy amin'ny Mac App Store, amin'ny fipihana ny rohy izay avelanay eto ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Games » GarageBand for Mac dia nohavaozina amin'ny kinova 10.1.1 miaraka amin'ny fanatsarana lehibe
ahoana no ahafahako mametraka garageband amin'ny mac book air 10.11.6 el capitan?
Ny Force Touch dia afaka nahatratra ny bokotra fitendry tamin'ny MacBook ho avy
Bobine Watch, fanohanana handefasana ny Apple Watch na dia ao anaty fiara aza